200K vashanyi vanobva kunyika makumi maviri neshanu: Tourism yekuEthiopia inokwira ne e-visa
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo » 200K vashanyi vanobva kunyika makumi maviri neshanu: Tourism yekuEthiopia inokwira ne e-visa
Airlines • nhandare yendege • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Ethiopia Kupwanya Nhau • nhau • ushanyi • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • Akasiyana Nhau
Nekuunzwa kwee-visa sevhisi munaJune 2017, Ethiopia yakavhura masuo ayo evashanyi vekunze vakafararira kupfuura nakare kose. Kubvira ipapo, iyo e-vhiza sevhisi yakatsanangudza zvekare vashanyi ruzivo rwekufamba, kurerutsa kupinda munyika ine digitized sevhisi inowanikwa kubva kune chero chikamu chenyika. Vachishandisa iyo e-vhiza sevhisi, vanhu vanopfuura mazana maviri ezviuru vanobva kunyika mazana maviri negumi nenomwe vakashanyira Ethiopia kusvika parizvino.
Ichitsigirwa neakazvipira kutenderera-iyo-wachi rutsigiro rwevatengi kuburikidza neemail, iyo e-Visa sevhisi inogonesa vafambi kuchengetedzeka e-Visa mumaawa asingasviki matanhatu neine pfupi nguva yekutendeuka kunhandare.
"Chiitiko chikuru muhuwandu hwevafambi vakashanyira Ethiopia kuburikidza nee-visa service inouya senhau yakanaka kwatiri tese muindasitiri yekushanya uye yekufambisa," vanodaro VaTewolde GebreMariam, Group CEO Ethiopian Airlines. “Chiitiko chikuru mazana maviri ezviuru chinoratidza chokwadi chekuti huwandu hwevashanyi vanoshandisa iyo digitized sevhisi iri kuwedzera. "Izvi zvinounza mabhenefiti kuEthiopia maererano nekufambisa uye kusimudzira kushanya, kutengeserana nekudyara munyika."
Iine kuwedzera mukati meMisangano yepasirese, Incentives, Misangano & Exhibitions (MICE) indasitiri, iyo e-visa sevhisi inopa Ethiopia mukana wekukohwa zvakanakira izvo zvinopihwa neindasitiri.
Kubatana kwemhepo kuEthiopia kunonakidzwa senzvimbo ye Etiopiya Airlines Boka pamwe nekushushikana kwemahotera nedzimba dzekugara munyika zvichawedzera Ethiopia senzvimbo inodiwa yeMICE.
Mumakore mashoma apfuura, Ethiopia yakatora matanho akakosha ekuita kuti kufamba kuve nyore uye kusina musono. Kunze kweiyo e-visa sevhisi, vafambi vanobhururuka kuEthiopia vanonakidzwawo vasina musono uye ekupedzisira-kumagumo sevhisi vachishandisa iyo nhare mbozha yekushandisa yendege.